Isbedelka Dijital ah iyo Muhiimadda isku dhafka Aragtida Istaraatiijiyadeed | Martech Zone
Mid ka mid ah xirmooyinka lacagta yar ee dhibaatada COVID-19 ee shirkadaha ayaa ahaa dardargelinta lagama maarmaanka u ah isbeddelka dijitaalka, oo soo maray 2020 65% shirkadaha sida laga soo xigtay Gartner. Hore ayay usocotay tan iyo markii ganacsiyada adduunka oo dhami ay doorteen habka ay u wajahayaan.
Maaddaama masiibada ay dad badan ka ilaalisay is-dhexgalka fool-ka-foolka ah ee dukaamada iyo xafiisyada, ururrada noocyadooda kala duwan ayaa macaamiisha uga jawaabayay adeegyo dijitaal ah oo aad ugu habboon. Tusaale ahaan, Jumladleyda iyo shirkadaha B2B ee aan waligood haysan dariiq ay wax ugu iibiyaan si toos ah waxay u shaqeynayeen waqti dheeraad ah si ay u soo saaraan awoodo ganacsi oo cusub, iyagoo isla mar ahaantaana taageeraya xoog-shaqaale guri-guri ah. Natiijo ahaan, maalgashiga tikniyoolajiyadda cusub ayaa kor u kacay si ay ula jaan qaadaan rajooyinka macaamiisha.
Haddana ku degdegaya inay maalgashadaan tikniyoolajiyadda si fudud sababtoo ah waa waxa la sameeyo Marar dhif ah waa qorshe ficil wanaagsan. Shirkado badan ayaa iibsada tikniyoolajiyad qaali ah, iyagoo u maleynaya in si fudud loo jaangooyn karo hadhow si ay ugu haboonaato moodello ganacsi oo gaar ah, dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, iyo ujeedooyinka khibrada macaamiisha, kaliya lagu hungoobo wadada.
Waa inuu jiraa qorshe. Laakiin jawigan ganacsi ee aan la hubin, waxaa sidoo kale jira deg deg. Sidee urur labadaba u fulin karaa?
Mid ka mid ah tixgelinta ugu muhiimsan, maaddaama shirkaddu u socoto si buuxda dijitaal ah, waa isdhexgalka aragti istiraatiijiyadeed oo adag oo ku saabsan IT-ga iyo suuqgeynta iyadoo isha lagu hayo guud ahaan qaan-gaadhka dhijitaalka ah. La'aanteed ururku wuxuu halis u yahay hoos u dhigista natiijooyinka, aloolo badan oo tikniyoolajiyadeed, iyo ujeeddooyin ganacsi oo seegay. Haddana waxaa jira fikrad khaldan oo ah istiraatiijiyad ahaan inay ka dhigan tahay in hawsha la gaabiyo. Arrintu sidaas maahan. Xitaa haddii ay shirkaddu si wanaagsan u soo baxdo, ma habsaamin in la sameeyo sixitaanno si loo gaaro ujeeddooyinka muhiimka ah.
Habka ugu wanaagsan ee lagu dhexgalin karo aragti istiraatiiji ah isbadalka dhijitaalka ah ayaa ah iyadoo la adeegsanayo maskax imtixaan iyo-barasho. Badanaa aragtidu waxay ka bilaabataa hoggaanka waxayna sii socotaa mala-awaallo badan oo lagu ansaxin karo iyada oo la adeegsanayo firfircoonaan. Ku bilow waxyar, ku tijaabso hoosaadyada, wax u barto si isdaba-joog ah, dhis dardar, iyo ugu dambeyntiina inaad ku guuleysato himilooyinka waaweyn ee ganacsiga iyo himilooyinka dhaqaale. Waxaa jiri kara dib u dhacyo daqiiqad ah inta lagu gudajiro wadada - laakiin habka imtixaanka-iyo-waxbarida, guul darrooyinka la dareemay waxay noqdeen barasho ururkuna markasta wuxuu la kulmi doonaa dhaq dhaqaaq horay u socda.
Waa kuwan talooyin dhowr ah si loo hubiyo in lagu guuleysto, isbeddel dijitaal ah oo waqtiyeysan oo leh aasaas istiraatiijiyad adag:
U dejiso rajooyin cad hoggaanka. Sida waxyaabo badan, taageerada xagga sare waa muhiim. Ka caawi madaxda sare inay fahmaan in xawaaraha aan xeeladaha lahayn uu yahay mid aan faa'iido lahayn. Habka tijaabada-iyo-barashada ayaa u horseedi doonta ururka hadafkiisa dhamaadka dhamaadka waqtiga ugu yar isla markaana sii wadi doona xoojinta aragtidiisa guud.
Maal-gasho tikniyoolajiyadaha taageerada ku habboon. Qayb ka mid ah geeddi-socodka is-beddelka dhijitaalka ah ee guuleysta ayaa leh xog ururinta iyo hababka maaraynta wanaagsan, qalabyo awood u siinaya awood u yeelashada tijaabinta iyo shakhsiga, iyo falanqaynta iyo sirdoonka ganacsiga. Xirmooyinka 'martech' waa in dib loogu noqdaa si guud si loo hubiyo in nidaamyadu isku xiran yihiin isla markaana si hufan u wada shaqeeyaan. Arrimaha nadaafadda xogta iyo geeddi-socodka buugaagta dhibku ka dhasho ayaa ah dhibaatooyin caadi ah oo hortaagan is-beddelka dhijitaalka ah. Nidaamyadu sidoo kale waa inay noqdaan kuwo la cabbiri karo oo dabacsan si ay ula shaqeeyaan tiknoolajiyada cusub ee lagu daray maaddaama ganacsigu isbeddelayo. Si tan loo gaaro, wada-hawlgalayaasha R2i ee ay la wadaagaan Adobe maaddaama bixintooda xalka loogu talagalay inay is-dhammaystiraan midba midka kale iyo tiknoolajiyada kale ee ugu heer-sarreeya ee ku jira nidaamka deegaanka 'martech ecosystem', iyagoo isku xiraya xogta laga helayo ilo-wareedyo kala duwan oo ku teedsan barxadaha dhexe.
Ha buux dhaafin hawsha. Dhexgal waqti ka dib. Ururo badan ayaa istaagaya teknoolojiyadooda dhijitaalka ah markii ugu horeysay, taas oo macnaheedu yahay inay jiraan waxyaabo badan oo la barto hal mar. Way fiicantahay in lagu weeraro maalgashiyada qaybo yar yar wajiga, adoo hanta nidaamyada sida aad u socoto. Sidoo kale, ururo badan ayaa haysta cadaadis dhaqaale oo culus, taas oo macnaheedu yahay inay waxbadan laqabtaan dad yar. Jawigaan, maalgashiyada hore waxay u badan tahay inay diirada saaraan otomaatiga si markaa shaqaalaha la heli karo loo helo inay diirada saaraan howlaha qiimaha lagu daray. Marka la sameeyo khariidad tiknoolaji ah, shirkaddu waxay noqon doontaa tan ugu waxtarka badan si ay ugu dambeyntii u gaarto yoolalka ballaadhan.
Ballanqaad inaad u soo bandhigto bil kasta ama saddexdii biloodba mar. Si howshu u shaqeyso, waa inay jirtaa daah furnaan ku saabsan waxa la baranayo iyo sida ay u saameyneyso qorshaha guud. U dejiso hadaf ah la kulanka hoggaanka shirkadaha iyo xubnaha muhiimka ah ee kooxda bil kasta ama saddexdii biloodba, si aad u siiso cusbooneysiin, barasho, iyo talooyin ku saabsan hagaajinta qorshaha. Si loo hubiyo hirgelin wax ku ool ah, waxay noqon kartaa caqli gal in la haysto lammaane dijitaal ah. Haddii COVID-19 uu wax caddeeyay, waa in xeeladaha culus aan dib dambe loo suuragalin karin maxaa yeelay markay dhacdooyin lama filaan ah soo baxaan, ururradu waxay u baahan yihiin inay awood u yeeshaan inay si dhakhso leh u xukumaan waxa ay tahay in la hakiyo iyo waxa is beddelaya. Wada-hawlgalayaasha khibradda u leh tikniyoolajiyadda iyo istiraatiijiyaddaba waxay leeyihiin faham qoto dheer oo ku saabsan sida labadoodaba isugu xirmaan. Waxay kaa caawin karaan dejinta qorshayaal fara badan oo wali wax ku ool ah oo waxtar leh saddex bilood, lix bilood, sanad, xitaa saddex sano kadib.
Sanadkii la soo dhaafey aduunku wuu is badalay - mana ahan kaliya coronavirus-ka. Filashooyinka waayo-aragnimada dhijitaalka ah ayaa isbeddelay, macaamiishana waxay filayaan isla heerka ku habboonaanta iyo taageerada, ha iibsadaan sharaabaadyo ama gawaarida sibidhka. Iyadoo aan loo eegin nooca ganacsiga, shirkaduhu waxay u baahan yihiin wax ka badan degel internet ah; waxay u baahan yihiin inay ogaadaan sida loo ururiyo xogta suuqa, sida loogu xiro xogtaas, iyo sida loo isticmaalo isku xirnaantaas si loo gaarsiiyo khibradaha macaamiisha shaqsiyeed.
Raad-raacgan, xawaaraha iyo istiraatiijiyaddu ma ahan yoolal is-dhaafsan. Shirkadaha sida saxda ah u saxaa waa kuwa aan qaadan kaliya maanka imtixaanka-iyo-barashada laakiin sidoo kale ku kalsoonaada la-hawlgalayaasha ganacsiga gudaha iyo dibaddaba. Kooxuhu waa inay ixtiraamaan hoggaankooda, fuliyayaashuna waxay u baahan yihiin inay bixiyaan taageero ku habboon. Sanadkii la soo dhaafey wuxuu ahaa mid caqabad ku ah waxa ugu yar - laakiin haddii ururadu isku duubnaadaan, waxay ka soo bixi doonaan safarkooda isbadalka dhijitaalka ah iyagoo ka xoog badan, ka caqli badan, aadna ugu xiran macaamiishooda si ka badan sidii hore.
Tags: adobeqalabayntaCOVID-19nadaafadda xogtaIsbadal digital ahdhexgalkaHoggaankaxidhmooyinwarbixintaaragti istiraatiiji ahistaraatijiyadTechnologytijaabi oo wax baro
Carter Hallett waa istiraatiijiyad suuq geyn dijitaal ah oo leh wakaaladda qaranka ee dijitaalka ah R2 dhexgalay. Carter wuxuu keensadaa 14 + sano oo khibrad ah iyo asal sifiican uxiran oo kormeeraya xeeladaha suuq geynta dhaqanka iyo dhijitaalka ah. Waxay la shaqaysaa labada macmiil ee B2B iyo B2C si ay u horumariyaan aasaaska istiraatiijiyadeed ee qoto dheer, xalliyaan caqabadaha ganacsigooda, iyo inay abuuraan isdhexgal mug leh oo macno leh, iyadoo diiradda la saarayo sheeko-curinta hal-abuurka ah, waayo-aragnimada macaamiisha 360-degree, soo-saarista dalabyada, iyo natiijooyinka la qiyaasi karo.
Daabacaad: Baahida Daabac iyo Dhameystirka Baaxadda